Isabalalisa samanzi → Ukuqina komzimba • Ama-Gyms • Ukuphuza amanzi kwi-Gym Warsaw
Ngabe udinga isisulu samanzi emakilabhini wokuzilolonga, indawo yokuzivocavoca? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba embonini, esingaba ngumhambisi kuphela ePoland.
Imisebenzi yezemidlalo kanye nanoma yikuphi ukuvivinya umzimba kwenza umzimba wethu ulahlekelwe ngokushesha amanzi namaminerali abalulekile aqukethwe kuwo. Kungakho-ke kubaluleke kakhulu ukuvuselela lezi zithako nokunakekela amanzi nomzimba olinganiselwe.
Lokhu kusiza ukufinyelela okungenamkhawulo kumanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba. Ukuhlunga kahle, kuhlanzekile futhi kucebile ngamaminerali wemvelo, amanzi angahlala etholakala kumakilabhu wokuzilolonga kanye nezindawo zokuzivocavoca ngokubonga abahlinzeki bamanje bokuphuza amanzi.
Abantu abasebenzisa amakilabhu wokuzilolonga kanye nabantu abasebenza lapho bazokuthokozela ukunambitheka kanye nokutsha kwamanzi akhona njalo avela ku-dispenser.
Izitsha zokuphuza amanzi ezingenasilinda ezixhunywe ngqo ohlelweni lokunikezela ngamanzi zinikeza ithuba lokusetshenziswa okuqhubekayo nokungabi nazinkinga kwamanzi ahlanzekile ngesikhathi sokuqina noma sekhefu phakathi kwawo.
Idizayini yesimanje ye-dispensers etholakalayo, ehambelana ngokuphelele nanoma yikuphi ukungaphakathi kwamakilabhu wokuzilolonga kanye nokuzivocavoca, kuyinzuzo eyengeziwe lapha.
Amadivayisi anjalo angafakwa kunoma iyiphi indawo yeklabhu yokuzivocavoca, ngokwesibonelo endaweni ehloselwe ukuphumula noma ngqo ejimini.
Kuyaziwa ukuthi ukuze ulondoloze impilo kanye nesibalo esinempilo, kufanele uphuze okungenani amalitha ama-2 amanzi ngosuku, futhi ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba, isidingo somzimba wamanzi sikhuphuka kakhulu futhi inani laso kufanele lenyuswe.
Amanzi abandakanyeka kuzo zonke izinqubo ze-biochemical emzimbeni wethu. I-hydration eyanele yomzimba ikuvumela ukuba usebenze futhi uzivivinye kahle. Ukuphuza amanzi ngesikhathi sokuvivinya umzimba kuthuthukisa ukusebenza kahle komzimba futhi kusiza ukuqeqeshwa. Inani lamanzi adakwa ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba lincike kubude nobungako bokuzivocavoca, kanye namazinga okushisa asendaweni.
Kubantu abaqeqeshayo, indawo abaqeqesha kuyo, umkhathi wayo nezinto zokwenza imishini nakho kubalulekile. Namuhla, kubhekelwa kakhulu indlela yokuphila enempilo, ngakho-ke kubhekelwa ukuthi indawo yokudlela iyakwazi yini ukunikela induduzo eyengeziwe, isb. Amanzi amasha akhona ngesikhathi sokuqeqeshwa.
Umhambisi wamanzi okuphuza uyakwazi ukufeza lokho okulindelwe, ngaleyo ndlela andise ukuheha nokuhlonishwa kwendawo.
Isitsha sokuhambisa amanzi sithatha indawo yesisombululo sendabuko samaminerali amanzi. Izitsha zokuphuza amanzi zisethelwe ezinkampanini, ezindaweni zokuzivocavoca kanye nasekilabhini lokuqina ukuze kwandise induduzo yokuhlala kulezi zindawo, futhi izinto ezisezingeni eliphakeme ezisetshenziselwa ukwenziwa kwalawa madivaysi ngaphezu kwalokho zibenza umhlobiso wamakamelo.
Amanzi esihlinzekwayo ahlala emasha futhi ehlanzekile.
Iziphuzo zokuphuza amanzi iyisisombululo semvelo futhi esingabizi, ngakhoke zivela kaningi kakhulu ezikhaleni zomphakathi, ezikhungweni, emahhovisi, ezinhlanganweni zokuzilolonga nasejimini.
Ubuchwepheshe besimanje obusetshenziswe ekwakhiweni kwama-dispenser buvumela ukusebenza okulula kakhulu.
Hlanza iklabhu lokuzilolongaamanzi ahlanzekile ejiminiamanzi amahhala ejiminiisitsha samanzi ejiminiImithombo eklabhu lokuzilolonga. Thatha iklabhu lokuzilolongaama-pitniks ekilabhini lokuqina komzimbaophuzayo ekilabhini yezokuzilolongaamanzi ejiminiamanzi eklabhu lokuzilolonga